Tababar ku aadan waxa ay diintu ka qabto Tacadiyada Haweenka oo Qardho ka furmay – SBC
Tababar ku aadan waxa ay diintu ka qabto Tacadiyada Haweenka oo Qardho ka furmay
Posted by Webmaster on Noofember 22, 2011 Comments
Tawabar ku aadan ka hortaga Gudniinka Gabdhaha ayaa maanta Magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar waxa uu uga furmay qaar ka mid ah bulsha weynta gobolka siiba Culimada u dhaqan deegaankaasi.
Tababarkan oo looga hadlayo gudniinka Fircooniga looyaqaan waxa ay ka qabto diinta islaamka ayaa waxaa fulintiisa iskalahaa Hay’adaha Smart Visioniyo weliba Hay’ada Unicef oo ka taageereysay dhanka fanka .
Furitaanka Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka soo qeyb galay dhinacyada bulshada, Maamulka Degmada Qardho, wasaarada diinta iyo Awqaafta Puntland iyo weliba Ururada Haweenka,
Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay C/shakuur Muuse oo ka mid ahaa howlwadeenada Hay’ada Smart Vision waxaana uu ka hadlay arimo badan oo ku saabsan waxyaabaha tababarkan lagu banayo isagoona faah faahin ka bixiyay khatarta Gudniinka Fircooniga uu ku keeni karo Gabdhaha.
Sh Buux waxa uu ka mid yahay Culimada gobolka waxaana uu sheegay in aan habooneyn in gabdhaha aan la googoyn, balse ay tahay sharci in la gudo gabdhaha laakiin aan loogeysan waxyaabo dhibaato ah.
Gaba gabadii Aqoon isweydaarsigaan oo ku aadanaa waxyaabaha ay diintu ka qabto Tacadiyada kala duwan ee loogeysto Haweenka ayaa waxaa ka qeyb galaya culimaa udiin waxaana uu ka socda badi deegaanada Puntland .